Top 5 kacha mma STP Broka na February 2021 | Ekpuchighị Uru & ọghọm
Top 5 kacha mma STP Brokas nke 2021
Ọ bụrụ na ị maara nke ọma na Forex, ị ga-amarakwa na e nwere ụdị isi atọ nke ndị na-ere ahịa na-eji nke ọma maka ndị ahịa iji nweta ahịa ahụ. Ndị a bụ ndị na-ere ahịa STP, ndị na-ere ahịa ECN na ndị na-ere ahịa ahịa.
Anyi bi n'ime uwa ebe anyi choro ka eme ihe ngwa ngwa na nke oma site na ojuju ozigbo. N'iburu nke a n'uche, anyị nwere ndị na-ere ahịa STP. N'ụzọ dị oke mkpa, nke a bụ n'ihi na ndị ahịa azụmaahịa chọrọ iwu ahịa ha gburu ozugbo.
Tinye okwu dị mfe - Ndị na-ere ahịa STP na-eme dị ka onye etiti n'etiti gị dị ka onye na-azụ ahịa na ahịa ahịa. Nke a na-ewe pụọ n'ihu ọnụnọ nke azụmahịa, nke a ga-ejikọkarị ya na ndị na-ere ahịa ahịa na ahịa. Then nwere iwu nke enwere ike ịhazi ya ozugbo, yana ịnye gị ụzọ na-enye ndị na-enye ego mmiri.
Otú ọ dị, na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ dị ka ndị na-enye STP ụbọchị ndị a, ọ nwere ike isi ike ịmata ebe ị ga-amalite.
Dị ka ndị dị otú a, iji nyere gị aka ịchọta ndị na-ere ahịa STP kacha mma nke 2021 - otu ndị ọkachamara anyị etinyela nduzi. Nke a na-ekpuchi ntọala nke nyiwe STP, ụfọdụ ndụmọdụ na-enye aka na ihe ị ga-ele anya, yana n'ezie - 5 nke kacha mma STP brokers kwesịrị ịtụle.
Kedu ihe bụ STP Brokas?
STP bu okwu achoro maka 'uzo site na nhazi'. Emeburu ya na London ihe dị ka afọ 30 gara aga, ebe eji ya maka azụmaahịa ahịa. Enweghi nnyonye aka aka ọ bụla - dịka STP bụ kọmputa kpamkpam, ndị na-ere ahịa dị otú ahụ na-eji teknụzụ emejuputa usoro ịkwụ ụgwọ akpaaka. A na-akpọ nke a dịka STP ma mepụta azụmahịa ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa karịa maka ndị ahịa.
A na-ewere ya dị ka nke ọma karịa usoro ịkwụ ụgwọ a na-akwụkarị, ọtụtụ ọrụ ego dịka 'nhazi ịkwụ ụgwọ' na-eji usoro a ọtụtụ oge. Dị ka anyị kwuru na, akụkụ azụmahịa nke ihe bụ ihe zuru oke na ndị na-ere ahịa STP a.
N'okwu Layman, nke a pụtara na kama ịmekọrịta site na tebụl na-emekọrịta ihe, onye na-ere ahịa STP ga-enyefe gị iwu gị n'aka ndị na-enye ego (na-enweghị mgbagha). Ndị na-enye ego na-abụkarị obere onye etiti ha n'ahịa nche. Institutionslọ ọrụ ego a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla site na ụlọ ọrụ itinye ego na itinye ego na ụlọ akụ.
Kedu ka ndị ọrụ STP si arụ ọrụ?
Ndị na-enye ego mmiri nwere ohere zuru ezu na ahịa interbank. Ndị na-ere ahịa STP kacha mma nwere ọtụtụ ndị na-enye ego mmiri na ọdọ mmiri ha, nke ọ bụla ga-ekwuputa ọnụahịa ịrịọ.
Ka anyị kwuo na onye na-ere ahịa STP nwere mmadụ isii na-enye ego mmiri.
Ha ga-ahụ mmadụ isii ụzọ abụọ nke ịrịọ-na-arịọ ruturu, otu onye ọ bụla na-eweta.
Mgbe a bịara n'ịhazi ndetu ndị na-eweta mmiri mmiri a, sistemu azụmaahịa STP ga-ahazi ntinye ego na-arịọ maka usoro nke kachasị mma ma gbakwunye obere ego na ntinye ọ bụla.
Nke a 'pip' agbakwunyere na onye ọ bụla na-eweta mmiri mmiri na-ekwu okwu bụ nnabata ọrụ onye na-ere ahịa maka inweta nkwuputa na ego maka gị. Ozugbo i tinyela iwu gị ịzụta otu ụzọ ego, onye na-ere ahịa gị ga-eziga iwu ahụ n'aka onye na-eweta ego.
Mgbe anabatara iwu ahụ, onye na-enye ego mmiri na-aga ịhụ ọkwa mbụ ha. Ka ọ dị ugbu a, onye na-ere ahia na-eme ka pipin fọdụrụ dị ka uru.
Kedụ uru dị na iji STP Broka?
Otu uru dị mkpa na-abata n'uche bụ na ndị na-ere ahịa STP agaghị edo gị n'okpuru nyocha. Nke a dị mma, nihi na ha nwere ike mebie ahịa gị. Ga-achọpụta na n'adịghị ka ụdị ndị ọzọ na-ere ahịa, enweghị ọtụtụ oge igbu oge na-enweghị isi. STP ga-enweta ekele maka ọganihu nke usoro FIX (Financial Information Exchange).
Ihe bụ isi nke STP bụ iji mee ka usoro igbu oge dị mkpụmkpụ. Nke a na - eduga na mbelata nke iwepụ na ndegharị, na -enyere gị aka inweta ihe kacha mma ga-ekwe omume ahịa. Enwere ike ịtụle ndị na-ere ahịa STP ka ọ dị ntakịrị ka ọ kwụ ọtọ, n'ihi enweghị esemokwu ọdịmma dịka anyị kwuburu.
Chapu mkpa maka itinye aka site na onye na-ere ahịa pụtara na onye na-eweta nwere ike ị nweta uru site na mgbasa ego na ahia ọ bụla. Nke a pụtara na ndị otu abụọ ahụ na-enweta azụmaahịa n'eziokwu na izi ezi. Ebe ọ bụ na teknụzụ na-eji ọsọ dị otú ahụ mgbe ị na-edepụta okwu, onye na-ere ahịa STP nwere ike ịnye ma jupụta iwu gị na ọnụahịa kachasị mma.
Mgbe ị na-ele anya mgbasa STP, a na-ahụta ha ka ha gbanwee. Nke a bụ n'ihi agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na-ajụ mgbe niile sitere na ọtụtụ okwu (nke ndị na-enye ego na-enye). Na nke ahụ, mgbasa ahụ na-asọ mpi, ọkachasị ma e jiri ya tụnyere ndị na-ere ahịa.
Ndị na-ere ahịa STP na ndị na-eme ahịa
Anyị chere na ọ dị mkpa ka ịnwe nghọta dị nkenke banyere ụdị ahịa dị iche iche dị iche iche na nkwupụta okwu tupu ị banye ma họrọ onye na-ere ahịa. A na-ewere STP na ndị na-ere ahịa dị ka ndị ahịa azụmaahịa abụọ a na-ejikarị eme ihe. Inwe ike ijide n'aka ndị na-ere ahịa sistemụ iji kwuo ọnụ ahịa nwere ike inyere gị aka ịghọta isi ihe nke ndị na-ere ahịa STP.
A na-akpọkarị onye na-ere ahịa na tebụl azụmahịa. N'adịghị ka ndị na-ere ahịa STP, ndị na-ere ahịa na-enye ọnụ ahịa ịrịọ kama ị gafere ndị na-eweta ego. Nke a pụtara na nkwupụta ahụ na-e priceomi ahịa ahịa.
Ndị na-ere ahịa n'ahịa anaghị etinye ọnọdụ ndị ahịa na ndị ọzọ na-enye ego mmiri. Ha debere ọnụahịa ịrịọ site na sistemụ nke ha. Ndị na-achụ ego nwere ike imeghe ma mechie ọnọdụ mgbe ịlele ọnụahịa na nyiwe onye na-ere ahịa.
N'ihi enweghị ego iji kwado ihe ize ndụ ahụ, ndị na-ere ahịa ahịa na-ajụ nnukwu ọnọdụ mgbe ụfọdụ. N'adịghị ka ndị na-ere ahịa STP, mgbasa a na-agbasawanye. Okwesiri ighota na nsachapu na ntughari okwu ndi mmadu na-eme ahia.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa na-enye onye na-ere ahịa na ọrụ STP ka ị wee nwee ike imeghari dabere na ihe ị chọrọ. Ihe omuma a gha adi na weebụsaịtị nke onye ahia ahia.
Gịnị Mere M Ji Kwesịrị Withzụ ahịa na STP Broker?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe - ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ maka ịzụ ahịa, ị nwere ike irite uru na ikpo okwu STP. Nke a bụ n'ihi na ị na-ezere onye na-ere ahịa na-etinye ọnụego elu - ọ na-abụkarị na azụ nke nnukwu ọkwa ọkwa ego (nke a bụ mgbe enwere ike ịjụ iwu).
Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ nke iji onye na-ere ahịa STP - nke anyị na-atụle n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
Liquidity na-eweta Di iche iche
Na nkenke, ndị na-ere ahịa STP kachasị mma na-enye gị dị ka onye na-azụ ahịa na ọtụtụ ndị na-enye ego. N’ụzọ dị mkpa, a na-achịkọta ha ọnụ ha ọnụ maka ịtụle.
Ndị na-ere ahịa STP nwere ike ịme ọtụtụ ụdị ahịa dị iche iche maka gị ọkachasị n'ihi na sistemụ na-agbakọ ọnụ ahịa site na ọtụtụ ndị na-enye mmiri n'otu oge. N'ezie, nke a pụtara na ị ga-enwe ohere ịre ahịa asọmpi karịa.
DMA (Nweta ahia ahia)
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa STP na-enye Nweta Ọsọ Direct - ma ọ bụ naanị DMA. Nke a bụ ihe ndị na-ere ECN na ndị na-ere ahịa STP nwere. Agbanyeghị, ebe nyiwe ECN na-enye DMA mgbe niile, ụfọdụ ndị na-ere ahịa STP anaghị eme ya. N'ihi ya, nyochaa nke a mgbe niile tupu ịbanye.
Ka o sina dị, usoro DMA na-ejikọ gị dị ka onye ahịa na ahịa ka ị nwee ike itinye iwu na ndị na-enye ego. Emere ihe a niile site na 'igbu ahia eletrọniki'.
Fọdụ atụmatụ DMA na-agụnye:
Onu ahia onu ahia ise
Nweta akwụkwọ ahịa
Naanị igbu ahịa
Enwere ike ịsị na ndị na-ere ahịa STP na-enweghị DMA nwere ike ọ gaghị abụ nke nghọta. Nke a bụ n'ihi na iwu ga-ejupụta na onye na-ere ahịa gị ma ndị na-enye ego mmiri na-echebe ya, site na mgbochi.
Akụ Dị Iche Iche Dị
Enwere klas dị iche iche dị iche iche maka gị site na onye na-ere ahịa STP gị. Akụ ndị akwadoro na-abụkarị ndị a:
Dị ka onye na-ere ahịa STP na-enye ohere ma onye na-ahụ maka mmiri mmiri na gị dị ka onye na-azụ ahịa iji jikọta, ọ dị mkpa ọkwa dị elu nke adịghị ahụ anya maka ha abụọ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, site n'ịzụ ahịa na onye na-ere ahịa STP - ọ dịghị onye ga-amata njirimara gị. Ga-abụ onye a na-agaghị amata aha gị, a na-azụkwa ahịa na ọnọdụ ahịa ọfụma, yana ọnụahịa anaghị ele mmadụ anya n'ihu.
Nke a nwere ike ịbụ ezigbo mma maka scalpers, dịka ọmụmaatụ. Nke a bụ n'ihi na ha ekwesịghị ichegbu onwe ha maka iwepụ ma ọ bụ kwughachi ihe - ọ bụghị ịkọwa ọnụego etiti mba ka mma na ịnweta ọtụtụ ego.
Withzụ ahịa na STP Pụtara Ntugharị Ọzọ
Ndị na-ere ahịa STP na-abụ ndị a ma ama n'etiti ndị ahịa n'ihi eziokwu ahụ na-anọpụ iche n'oge niile. Nke a bụ ikpe n'agbanyeghị agbanyeghị ma ị na-enweta uru. Ka ọ dị ugbu a, ị maara na ịme ahịa site n'aka onye na-ere ahịa STP anaghị etinye aka na tebụl na-emekọrịta ihe (onye na-ere ahịa). Yabụ, nke a pụtara na ị ga-abanye ahịa na ezigbo ahịa karịa nke onye na-ere ahịa 'mepụtara' site na iji usoro nke aka ha.
Ọtụtụ ndị ahịa kwenyere na nke a na-eme ka ndị na-ere ahịa STP nwee nghọta na ntụkwasị obi. Are na-enwe ike nweta ohere ka mma na ngwa ngwa jupụtara n'ime site na iji ụdị ore ahia.
Maka ndị na-amaghị, njuju bụ usoro iwu emere.
Dịka ọmụmaatụ, ị na-etinye iwu ịzụta maka ngwaahịa na £ 100 ma onye na-ere ahịa kwenyere na ya.
Onye na-ere ahia mechara ahịa na iwu 'jupụta'.
A maara £ 100 dị ka ihe jupụtara, ma a na-akpọ ya ọnụahịa igbu.
A na-eme iwu niile na akpaghị aka site na netwọkụ, yana amaghi aha ha niile.
N'ihi ọdọ mmiri ndị na-enye ego, onye na-ere ahịa STP ga-enye gị ọnụahịa kacha mma ma gbasaa nhọrọ niile dị site na onye na-ere ahịa gị. Ihe di egwu banyere inwe uzo ruturu aka bu na igaghi aghagha gi ihe o bula edeturu.
N'ọnọdụ nkịtị, mgbe a jụrụ otu n'ime iwu azụmaahịa gị n'ihi mgbanwe nke ọnụahịa nke akụ, ị ga-akụghachi ọnụahịa ọzọ. Mgbe ị na-ereghị ahịa site na onye na-ere ahịa STP, usoro ikpo okwu dị iche iche ga-agụghachi ihe onwunwe (nke nwere ọhụụ na-agbanwe agbanwe).
Mee elu mee ala, re-ruturu nwere ike ịbụ detrimental gị trading rụzuru n'ikpeazụ, n'ihi na ọ na-adịkarịghị na-arụ ọrụ gị amara!
Ndị na-ere ahịa STP anaghị azụ ahịa megide ndị ahịa ha
N'adịghị ka ndị na-ere ahịa ahịa; enweghị esemokwu mmasị na ndị na-ere ahịa STP. Kama ị nweta ego site na nfu nke ndị ahịa ha, ndị na-ere ahịa STP agaghị ewere ọnọdụ ọzọ. Ọ bụrụ na ha mere, ha ga-enwe ike irite uru site na ọdịda gị ma nweta uru ahụ.
Ndị na-ere ahịa STP na-emepụta uru naanị site na ịnwe ụgwọ ọrụ dị ala na azụmaahịa ọ bụla (nke a na-akpọkwa akara), kama ịga megide gị iji kpuchie azụ ha.
Ntụle Mgbe Chohọrọ STP Broker
Anyị na Mụta 2 ahia na-eche na otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa ị ga-eche banyere mgbe ịchọta ezigbo onye na-ere ahịa bụ ijide n'aka na ha na-achịkwa. Ọfọn, ọ bụ ebe dị mma ịmalite ma ọ dịkarịa ala. N'ime nke a, ị ga-ejide n'aka na ego azụmaahịa gị nọ na nchekwa.
Mgbe ị na-eme mkpebi na STP kacha mma maka gị, ọ dịkwa mma ịhọrọ onye nwere mgbasa na-agbanwe agbanwe. Nke a bụ n'ihi na o yikarịrị ka ha ga-ahọrọ ọnụahịa kacha mma site na otu, nke kachasị mma jụọ mgbasa site na onye ọzọ (niile n'ime ọdọ mmiri na-eweta mmiri mmiri ha).
Enwere ụfọdụ ihe ndị ọzọ anyị chere ị kwesịrị ịtụle Na ọchụchọ gị maka ndị na-ere ahịa STP kacha mma - nke anyị na-atụle n'okpuru.
Inye ikike Ugo-Otu
Dịka anyị kwuru, anyị na-akwado gị ka ịhọrọ onye na-ere ahịa STP nke nwere ikikere zuru oke ma dezie ya. Agbanyeghị, anyị echekwara na ị ga-aga otu nzọ ụkwụ site n'ịhụ na otu ọkwa otu otu enyela ikike ahụ.
Nke a ga-agụnye ihe ndị dị ka nke:
CySEC - Saịprọs
Ndị na-ere ahịa STP kachasị mma na-achịkwa ọtụtụ ọkwa otu. Will ga-ahụkwa na ndị na-ere ahịa a tụkwasịrị obi na-echekarị echiche ma a bịa n'ịwepụta atụmatụ ọhụrụ na mma maka nkwado na obi ụtọ gị dị ka onye ahịa.
N'ikpeazụ, ndị na-ere ahịa na-achịkwa nwere oke egwu na ịdịgide na Forex ahịa. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana ị nwekwara ike ijide n’aka na ekewapụla ego gị yana mkpuchi.
E Kewara Ego Ndị Ahịa?
Dịka anyị emetụla aka n'elu, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji nkewa ego wee nwee otu ihe. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ụlọ ọrụ na-edebe ego gị iche iche na nke ya maka nchebe nke ego gị.
Dịka onye ahịa, ọ dị mkpa ịmara na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ baa n'ụgwọ, a gaghị ewere ego azụmaahịa gị dịka akụkụ nke ụgwọ ha. Ihe kpatara nke a bụ na dabere na ọkwa nchekwa ego nke onye na-ere ahịa STP na-enye, a ga-ekewapụ ego gị na nke ụlọ ọrụ ahụ, yana mkpuchi zuru oke.
Iji maa atụ, ọ bụrụ n’inwee nnukwu nchekwa ego, mgbe ahụ ndị ọzọ na-echedo ego gị. Mgbe ahụ, na nhụsianya nke ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-agba mmiri, enwere iwu iwu maka ụlọ ọrụ nke atọ iji nyeghachi gị ego gị.
Gwọ na isslọrụ
Abịa na ụgwọ na commlọrụ, nghọta dị oke mkpa. Ndị na-ere ahịa STP kachasị mma ga-enye gị ọrụ ịsọ mpi na ụgwọ mgbe ha na ha na-azụ ahịa. Ihe kachasị mma bụ na ọtụtụ ndị na-ere ahịa STP agaghị ana gị penny maka ịkwụnye na ịwepụ ego. N'ezie, ị ga-achọ iji chọpụta na ore ahia gị na nke a bụ ikpe na ha.
Otú ọ dị, a ga-enwe obere akara na azụmaahịa ọ bụla, nke a ga-adị iche site na onye na-ere ahịa na onye na-ere ahịa. Nke a bụ otú onye na-ere ahịa STP ga-esi enweta ego ya. Kwesịrị inwe ọnụ ọgụgụ buru ibu nke isi obodo ahia na onye na-ere ahịa STP.
Dị ka ndị dị otú a, lelee usoro na ọnọdụ dị na saịtị ahụ iji hụ ihe ọrụ na ụgwọ ị ga-atụ anya mgbe gị na ha nwere akaụntụ. Wayzọ a, ị ga - ezere ihe ịtụnanya ọ bụla jọgburu onwe ya ma emechaa gbadaa.
Ndị na-ere ahịa STP kachasị mma ga-enwe otu ọrụ ndị ahịa na-eju anya iji kwado gị oge ọ bụla ịchọrọ. Anyị na-ahụ na ndị na-ewu ewu STP kachasị ewu ewu na-enwe nhọrọ nkata ndụ na ikpo okwu ha na nkwado 24/7 iji buut.
E kwuwerị, ọ bụrụ na ị na-emekọrịta akụnụba ego, ịchọrọ netwọkụ nkwado ga-enyere gị aka mgbe ọ bụla ịchọrọ ya. Inwe ezigbo ụzọ ịkpọtụrụ na nkwado dị gị aka bara oke uru ma a bịa n'ịchọta ezigbo onye na-ere ahịa.
Formsdị kọntaktị ndị ọzọ dịịrị gị nke ka mma. Otú ọ dị, ọ dịghị ndị na-ere ahịa STP abụọ bụ otu, yabụ na-eme ihe omume ụlọ akwụkwọ gị oge niile ka ị mara ụdị ikpo okwu ị ga-eme.
E nwere ụzọ dị iche iche ị ga-esi tinye ego na akaụntụ azụmaahịa STP gị. Ihe ngwugwu STP ọ bụla ga-adịtụ iche na nke a.
Maka ọtụtụ akụkụ, ndị na-ere ahịa STP na-enye ọnụọgụ dị ukwuu nke usoro ịkwụ ụgwọ a nabatara, yana ole na ole n'ime ndị na-enyo enyo. Ndị a bụ ụzọ ịkwụ ụgwọ a na-ahụkarị:
Ebe E Si Nweta na Debit kaadị
Kaadị akwụ ụgwọ
Ọzọkwa, ị ga-achọ ịlele nke a tupu iwere ya na onye na-ere ahịa ọhụụ.
Ngwa ahia na ngwa oru
Ndị na-ere ahịa STP kachasị mma ga-eme ọtụtụ ngwaọrụ dị iche iche na ihe ahịa azụmaahịa dị gị na ikpo okwu ha.
Ha ga - abụkarị:
Ngwaọrụ njikwa ihe egwu
Akụkọ banyere ahịa ego
Anyị na-eche na ndị ọzọ ego ihe STP ore nwere ike na-enye gị, mma gị trading ahụmahụ ga-.
Ihe ngosi nka bu uzo di nma nke imuta ugwo onu ahia.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị a na-ahụkarị na nyiwe STP:
SAR (Parabolic Kwụsị ma Gbanwee)
ADX (Ntọala Ntuziaka Nkezi)
Ichimoku Kinko Hyo (nke a na-akpọkwa Ichimoku Cloud)
Gịnị bụ ọnyà nke iji STP Broker?
N'ikwu eziokwu, ebe enwere uru, a na-enwekarị ọghọm ole na ole, kwa. Dị ka ndị dị otú a, ọ bụ naanị ihe ziri ezi na anyị na-eme ka ị mara ihe ụfọdụ na-adịghị mma nke ịhọrọ ịmepe akaụntụ na STP broker.
Dị ka ị maraworị, obere nza bụ otu puku nkeji nke isi ego (ego dị n'aka ekpe nke ụzọ ahụ). N’uche nke ọma, ndị na-ere ahịa STP anaghị eme ka ọtụtụ nza.
N'oge ụfọdụ, ndị na-ere ahịa na-ejide ọnọdụ nke nza 0.1 (ego ego 10,000). Nke a pụtara na ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepe ọnọdụ maka nza 0.01 (nkeji ego 1,000) - ị nweghị ike, ebe ọ pere mpe.
Ndị na-enye ego mmiri nwere ike ịnwe ọnụ ahịa ọrụ na ihe achọrọ. N'ihi ya, na-enweghị ohere ka ọtụtụ-nza, ị ga-hoo haa na-eme gị nnyocha iji chọpụta nke ụdị ore suut gị trading ịke na n'ezie mmefu ego.
Na ntụgharị ihu - ọbụlagodi na ịnwere obere mmefu ego ma achọghị imeghe nnukwu ọnọdụ, onye na-ere STP nwere ike ịbụ ụdị onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị maka gị.
Na-agbasa Agbasa Naa
N'oge mgbanwe dị na ahịa ego, mgbasa ahụ nwere ike ịgbasawanye nke ukwuu. Ya mere, ị nwere ike ịchọpụta na mgbasa na STP brokers nwere ike ọ gaghị agbanwe agbanwe.
Dịka anyị metụrụ na mbụ, ọbụlagodi ndị na-ere STP kachasị mma nwere ike ịtụle oge ụfọdụ dị oke ọnụ. Nke a bụ n'ihi na isslọrụ na-ebo ebubo na onye ọ bụla ahia iji. Maka ndị na-amaghị, a na-egosi ndị a pips (isi na pasent).
Fọdụ ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ pipụ maka pipụ onye ọ bụla. A ga - agbakwunye agbasa maka mgbasa ozi maka ndị ahịa na - ere ahịa ka ha hụ, mana oge ụfọdụ ga - abụ akara anaghị ahụ anya ị.
Na ihe ize ndụ nke ikwugharị onwe anyị, ọ dị mkpa ịlele usoro na ọnọdụ ndị ahụ. A sị ka e kwuwe, ị gaghị enwe ike ịmepụta akaụntụ azụmaahịa STP ọhụrụ tupu ịmara ihe ọ ga-efu gị iji zụọ ahịa.
Debanye aha na STP Broker - Otu-esi eduzi
N'oge a na ntuziaka anyị, ị kwesịrị inwe nghọta ka ukwuu banyere ọrụ nke onye na-ere ahịa STP na azụmaahịa azụmaahịa, yana otu esi achọta ezigbo ikpo okwu.
Agbanyeghị, tupu ị nweta bọl bọọlụ, ị ga-ebu ụzọ kpebie nke onye na-azụ STP ga-egbo mkpa gị. Ọ dị mma mgbe niile ịme nyocha gị tupu ịmebe onwe gị kpamkpam.
Best Forex Broka 2019 Top 3 Tụkwasịrị Obi Ecn Ma Stp Forex Broker Ic Market Forex Broker - Forex Broka
Ka o sina dị, n'okpuru ị ga-ahụ ụfọdụ usoro dị mfe iji bido ịmalite mgbe ị banyere ịbanye
Nzọụkwụ Otu - Chọta onye na-ere ahịa STP
N'agbanyeghị nke ahụ, amaghị nke STP broker kwesịrị ekwesị maka gị? Atụla egwu, ndị otu anyị raara onwe ha nye chịkọtara ndepụta nke kacha mma STP broka nke 2021.
Anyị na-eche na ndị na-ere ahịa anyị edepụtara niile nọ n'elu egwuregwu ha, ma ha kwesịrị oge gị na ntụgharị uche gị. Ga-ahụ nyiwe pre-vetted anyị na njedebe nke ibe a.
Nzọụkwụ abụọ - Mepee Akaụntụ Akaụntụ
Yabụ, iche na ị chọtala onye na-amasị STP ịchọrọ, ọ bụ ugbu a ịdebanye aha. Dị ka bụ ụkpụrụ usoro ọ bụla ore ahia, ị ga-dejupụta a pụtara dị mfe ụdị.
Ozi achọrọ n'ozuzu bụ ndị a:
Nkọwa kọntaktị; ọ na-abụkarị nọmba ekwentị na adreesị ozi-e.
Ozi ego ọ bụla achọrọ; dị ka ego ego kwa ọnwa na ahụmịhe azụmaahịa (ozi a rịọrọ ga-adị iche site na onye na-ere ahịa na onye na-ere ahịa).
Nzọụkwụ nke atọ - Mata Onwe Gị
KYC (Mara Onye Ahịa Gị) bụ ọrụ iwu kwadoro nke ndị na-ere ahịa na-achịkwa ga-ebu tupu i kwere ka ịmepe akaụntụ.
Onye na-ere ahịa STP ga-achọ iji hụ na isi mmalite ego gị ziri ezi yana na ị bụ onye ị na-ekwu na ị bụ. N'ikwu okwu sara mbara, ị ga-ezitere onye na-ere ahịa akwụkwọ nyocha akwụkwọ paspọtụ gị ma ọ bụ ụdị ID ọzọ anabatara.
Site n'oge ruo n'oge onye na-ere ahia nwere ike ịchọ ntakịrị ihe akaebe nke njirimara gị, dị ka ụgwọ ekwentị, ụgwọ ọrụ, ma ọ bụ akwụkwọ ozi ọ bụla nwere aha gị na adreesị ụlọ gị.
Nzọụkwụ anọ - Nkwenye Akaụntụ
Ọtụtụ mgbe ị ga-enweta nkwenye nke akaụntụ ọhụrụ gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ị na - eche obere oge maọbụ na ihe adịghị eyi ka ọ dị mma, anyị na - adụ ọdụ ịkpọtụrụ ndị otu nkwado ndị ahịa STP. Onye ọ bụla na-ere ahịa na-adị iche ma a bịa n’usoro esi arụ ya, ụfọdụ nwere ike iwe ogologo ma ọ bụ zuo oke karịa ndị ọzọ.
A ngwa ngwa oku ma ọ bụ email ka ndị ahịa na-akwado otu ga-emekarị-eme ka gị nkwenye a na-achụ ọsọ n'ihi na ị ka i wee tinye uche gị udo.
Nzọụkwụ ise - bido
N'oge a, ekwesịrị ịtọbido ịmalite dị ka onye na-azụ ahịa.
Ikwesiri ịbanye nbanye na akaụntụ STP ọhụrụ gị site na iji aha njirimara na paswọọdụ gị. Mgbe ahụ, ihe niile a ga - eme bụ ịhọrọ nhọrọ ịkwụ ụgwọ gị na itinye ego.
Ọ bara uru ilebanye anya na ma enwere akaụntụ ngosi ngosi STP maka gị ka ị nwee omume na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na ị ka na-atụ ụjọ iji zuru ike n'ihu.
5 Kachasị mma STP Broka nke 2021
Achọpụtaghị usoro ikpo okwu STP kwesịrị ekwesị nke na-egbo mkpa gị? N’okpuru ị ga - ahụ nhọrọ nke 5 kacha mma STP broka nke 2021!
1. Forex.com– Kachasị mma All-Round STP Broker
Forex.com bụ aha-ejide aha na Forex idaha. Ọ na-enye ma akaụntụ ECN na SPN, yana obere nkwụnye ego na-amalite naanị $ 50. Ga-enwe ohere karịrị 90 forex abụọ, na ikpo nke ụzọ ịkwụ ụgwọ akwụ ụgwọ. Dịka ezigbo ore ahia, Forex.com na-achịkwa ọtụtụ ọkwa otu.
2. FXTM– Best STP Broker maka Zero Zlọrụ
Nlekọta nke ọma FX TM na-enye akaụntụ STP zuru ezu. N'elu Forex, ị nwekwara ike ịnweta ebuka, ọla, ike, na ndị ọzọ. Kwesiri ịchọta obere nkwụnye ego kachasị elu nke $ 500, yabụ na onye na-ere ahịa STP kacha mma maka ndị nwere nnukwu bankroll. Ma MT4 na MT5 na-akwado, ị gaghị akwụ ụgwọ ụgwọ azụmahịa ọ bụla.
Ma ị na-achọ ịzụ ahịa site na ZuluTrade, cTrader, ma ọ bụ usoro MT4 / 5 - Pepperstone kpuchiela gị. Nke kachasị, ị ga-enwe ike ịnweta akaụntụ azụmaahịa STP na pịa bọtịnụ. Nwere ike ibu akaụntụ gị ozugbo na a debit / kaadị akwụmụgwọ. Feesgwọ ahịa, ọrụ, na mgbasa na-asọ mpi na Pepperstone, na iwu na-ewere oke egwu.
4. Chee echiche Markets– Best STP Broker For High Leverage
Ọ bụrụ na ị na-achọ onye na-ere ahịa STP nke na-enye oke ikike ịgba ụgwọ, Chee echiche n'ahịa nwere ike ịbụ n'okporo ámá gị. Site na ntinye aka nke ihe ruru 1: 500, otu $ 100 ga-ewepụta ihe kachasị $ 50,000. Ikpo okwu a nwere ọtụtụ ikikere dị elu, gụnyere nke FCA. Nkwụnye ego pere mpe na-amalite na $ 500, nke ị nwere ike iji kaadi debit / kaadị ma ọ bụ obere akpa ozugbo.
5. Robo Forex - Akaụntụ STP Na-agbasa 0
Na nwatakịrị anwansi, Robo Forex bụ onye na-ere ahịa n'ịntanetị nke na-enye mgbasa 0. Ọ na-eme nke a site na akaụntụ STP ya, yabụ ị nwere ike ịzụ ahịa site na usoro nhazi ọnụahịa na-eduga. Nke kachasị, ị nwere ike ịmalite na akaụntụ yana obere nkwụnye ego naanị $ 10.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na enwere iwu na ụkpụrụ siri ike iji chebe gị dịka onye ahịa ma ọ bụ onye na-etinye ego, na ndị na-ere ahịa STP kachasị mma ga-enwe ikikere zuru oke maka nke ahụ.
N'ihe banyere nchedo ego azụmaahịa gị na ịtụkwasị obi na onye na-agba ahia gị, mgbe ahụ, usoro ikpo okwu zuru oke dị oke mkpa. Maka nke ahụ, anyị agaghị akwado onye na-ere ahịa STP (ma ọ bụ ụdị ọ bụla) nke anaghị achịkwa nke ọma maka nchekwa gị.
Ka o sina dị, otu uru dị mkpa nke ịzụ ahịa na onye na-ere ahịa STP n'elu onye na-ere ahịa bụ na ị nwere ike ịbanye ahịa na ezigbo ahịa. Ekele dịrị ọtụtụ ndị na-enye ego mmiri na-enye onyinye site na onye na-ere ahịa STP gị, ị ga-enwe ohere ịsọ asọmpi asọmpi. N'elu nke a, a ga-egbu iwu gị na ndenye ahịa gị na ọsọ na nkenke.
Na-eme nyocha gị oge niile tupu ịmezuo, dịka ndị na-ere ahịa dị iche na ngwaahịa na ọrụ ha ga-adị iche. Ọ dịkwa mma ka ịmalite na obere ego ebe ị hụrụ ụkwụ gị.